Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » बुहारी र बिष्ट !
बुहारी र बिष्ट !
मेघराज सापकोटा, युएई । गोकर्ण बिष्टसँग दाँजेर धेरैले सामाजिक सँजालमा बुहारीको चर्चा गरे । प्रहार गरे । हेर्नुस्, लोकतान्त्रतिक आन्दोलनमा बुहारीहरुको आफ्नै योगदान छ । जनयुद्दमा बुहारीले खेलेको भूमिका तिमी हामीले खेलेको भूमिका भन्दा कयौ माथि छ । बुहारीले भ्रस्टाचार गरेको भए मुद्दा हालौ, अख्तियारमा उजुरी गरौ । कार्यसम्पादनमा उनको रिजल्ट नराम्रो पनि छैन ।
युग परिवर्तनमा जीबन कुर्बाही गरेकाहरु दाई, भाई, बाउ, छोरा, सासु, ससुरा, दिदी, बहिनी, भतिज, भातिजी, नाती पनाती सबैले राष्ट्रको सेवा गर्न सक्छन् । कसको को नाता कुन पदमा छ भनेर पदको बाँडफाँड हुन्न । ब्यक्तिगत योगदानको आधारमा जिम्मेवारी दिईने कुरा हो । देश-बिदेशमा दोश्री तेस्री चौथी सम्म गर्ल फ्रेन्ड बनाउने र लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुले बुहारी प्रति बायोस हुन जरुरी छैन् ।
जहाँसम्म श्रममन्त्री कुरा छ, मिल्छ भने पार्टीमा भित्र्याएर भए पनि पूर्व श्रममन्त्री टेक बहादुर गुरुङलाई फेरी श्रममन्त्री बनाऔ । ‘म्यानपावर ब्यवसायी’ का अनुसार त्यो युग श्रमको क्षेत्रमा स्वर्णिम युग थियो रे । त्यसपछि फर्मुल्लाह मन्सुर पनि तगडा श्रममन्त्री रे । उनिहरुलाई पार्टी प्रबेश गराएर भए पनि श्रममन्त्री बनाउन पर्‍यो ।म्यानपावर ब्यवसायी खुशी पार्ने उपाय यो पनि हो । श्रमको क्षेत्रमा स्वर्णिम युग तिनै ताका थिए ।